ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5အမှုအရာမိန်းကလေးများဟာပြိုကွဲပြီးနောက် Do
ကရင်ဆိုင်ရမယ့်ကြစို့, ချိုး-ups ခက်နေပါတယ်. ကစတင်လုပ်ဆောင်သောသူသည်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ, ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်မည့်ပုံ. စဉ်, နောက်ဆုံးမှာ, ငါတို့ရှိသမျှသည်အခြားမေတ္တာကိုရှာတွေ့မှပေါ်ရွှေ့, အားလုံးမိန်းကလေးများလုပ်ဆောင်အနည်းငယ်သောအမှုအရာကိုတက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးနောက်ရှိပါတယ်. အနည်းငယ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်:
1. အော်ဟစ်ခြင်း – အများကြီး
တကမှတ်ဉာဏ်အပေါ် reminiscing င်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဆုလက်ဆောင်, သီချင်း, စိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်ကျပန်းပေါက်ကွဲခြင်း, ဟစ်ကြော်လျက်လွှဲမရှောင်သာဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. ထိခိုက်ရှနာနှင့်စိတ်ခံစားမှုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်တိုင်ချိုး-up ကအနာရောဂါငြိမ်းစရာဖြစ်စဉ်တွင်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်ခံရခြင်း.
2. Facebook ကသူမ၏ရည်းစားဟောင်းန့်ပွားနေ
လူမှုမီဒီယာများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူ, ဒီဖြစ်ကောင်းမိန်းကလေးများတစ်ချိုး-up ပြီးနောက်မသိသာထင်ရှားမှုအရှိဆုံးနှင့်အဖျက်အမှုအရာဖြစ်. ပင်ကို un-Friends ပြီးနောက်, မိန်းကလေးများကိုကူညီပေမယ့် type ကိုသူမ၏ရည်းစားဟောင်း၏နာမ၌ Search bar မှာသို့နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သူနဲ့အရာရာဓာတ်ပုံလိုက်လံချောင်းမြောင်းမခံနိုင်သည်, စာမျက်နှာ, နှင့်အဆင့်အတန်းကိုသူကြိုက်တယ်သို့မဟုတ် commented on ကိုခဲ့သည်.
3. shaving အားလုံးကိုရပ်တန့်
ဒီလူကိုဒေါသူပုန်ထမှုအလျောက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲကိုအထောက်အကူဖြစ်သွားချိန်တွင်. ဒါဟာအစနှလုံးချိုးမိန်းကလေးများအားလုံးမျက်နှာစွမ်းအင်အနည်းငယ်မျှပင်အရွက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. နောက်ထပ်, အသစ်ဖွင့်တစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်းရှိအထင်ကြီးစရာမတစ်ဦးဖြစ်သည်နှင့်သူမ၏ခြေထောက်ရိတ်ဒါမှမဟုတ်မလျှင်မိန်းကလေးများလျော့နည်းဂရုစိုက်နိုင်.
4. တစ်ဦးမှတဆင့်ဝင် “floozy” စင်
ဒီအဆင့်ကမိန်းကလေးမှမိန်းကလေးပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နှင့်လည်းဆက်ဆံရေးကြာမြင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအပေါ်မူတည်. သို့သော်ထိုသို့နေပါစေအဘယ်သို့ပြောသည်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်း, တိုင်းမိန်းကလေးတချို့လမ်းသို့မဟုတ်အခြားအတွက်ဒီအဆင့်ကနေတဆင့်သွား. တလည်းအများအပြားအချိုရည်ရှိနေသလားဆိုတာ, sexting, သို့မဟုတ်မျိုးစုံယောက်ျားတွေနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးလာပြီ.
5. Self-ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အသစ်သောအရာတို့ကိုကြိုးစားနေမှတဆင့်သူကိုယ်တိုင် Reinvents
Self-အကူအညီနဲ့စာအုပ်တွေထဲကနေယောဂဖို့ရုပ်ရှင်နှင့်စာအုပ်များကိုဖှယျမှ, တိုင်းမိန်းကလေးမိမိကိုယ်ကိုတီထွင်ရန်ကြိုးစား. ကဝမ်းနည်းပူဆွေးကို process ရန်အထောက်အကူပြုသည်သာမဟုတ်ဘဲတကရှင်းလင်းအခိုက်အဘယ်မှာရှိမိန်းကလေးငယ်များဖြစ်သကဲ့သို့ဤအဖြေသည်ချိုး-up က cycle မှာအလွန်အရေးကြီးပါသည် “ရှာတွေ့” သူမကိုယ်သူ.